I-Subaru kunye neQela leMidlalo yeBhola ekhatywayo eNtsha yenza uMlo woSuku lweNja
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Subaru kunye neQela leMidlalo yeBhola ekhatywayo eNtsha yenza uMlo woSuku lweNja
I-Subaru yaseMelika, Inc. namhlanje ibhengeze ukuba ngokubambisana ne-Philadelphia Union, i-automaker iya kubamba lo mcimbi ngeCawa, ngo-Oktobha 24, uzinikele ekunikezeni izinja kwindawo enkulu yaseFiladelphia imini engcono kakhulu yobomi babo.
Ebizwa ngokuba yi "Yenza Inja yoSuku lweNja," umsitho wosuku lonke umema abathandi bezinja, abanini bezinja kunye nemibutho yezilwanyana zasekhaya eSubaru Park, kwikhaya leManyano yasePhiladelphia, ukubhiyozela izihlobo zabo ezinoboya. Kwabo bajonge ukugoduka nomhlobo wabo onoboya, Yenza uMbhiyozo woSuku lweNja iya kubandakanya umboniso wokwamkelwa kwezinja ngentsebenziswano nemibutho yezilwanyana zasekhaya. Iindwendwe zinokudibana nezinja ezingaphezu kwe-100 ezifumanekayo ukuze zikhuliswe ngabanye abantu * kwaye ukuba zinomdla wokubonelela ngekhaya elinothando lesilwanyana sasekhaya, ziya kuhlawulelwa iintlawulo zokuthatha umntwana ongamzalanga abe ngowakho. Umnyhadala uya kuba nomboniso, ukutya, imidlalo, imiboniso kunye nomdyarho wenja oyimayile enye apho amantshontsho anokubaleka, ahambe kwaye aqhube ukuze aphumelele amabhaso.
“Nabani na onenja uyazi ukuba zihamba ngaphezulu nangaphezulu ukwenza usuku lwethu lubengcono. Kulo nyaka, thina kwa-Subaru sigqibe ekubeni sibuyisele ububele ngosuku oluzinikele ekuthandeni nasekuzonwabiseni namantshontsho e-Subaru Park," utshilo u-Alan Bethke, uSekela Mongameli oPhezulu weNtengiso, i-Subaru yaseMelika, Inc. "Sijonge phambili kumnandi kakhulu. Usuku nabahlobo bethu - abantu kunye nenja - kwindawo enkulu yasePhiladelphia kwaye sikhuthaze nabaphi na abaza kuba ngabamkeli bezinja ukuba bamise kwaye badibane nomhlobo omtsha osenyongweni. "
"Ngokusekwe kwimpumelelo yenkqubo yokwamkelwa kwezinja ngeentsuku zomdlalo weManyano, siyazi ukuba Yenza uMbhiyozo woSuku lweNja iya kuba luqhushululu kubathandi bezinja kunye nezilwanyana zasekhaya ngokufanayo," utshilo uTim McDermott, uMongameli weManyano yasePhiladelphia. "Njengombutho ocinga kuqala ekuhlaleni, kubalulekile kuthi ukuba sifumane iindlela zokubuyisela kunye nokuphucula ubomi bezinja kunye neentsapho kwindawo yasePhiladelphia."
Yenza i-Dog's Day Fest iya kwenzeka kwi-Subaru Park (2502 Seaport Dr. Chester, PA 19013) phakathi kwe-10am. EST kunye 4p.m. EST. Abo banomdla wokuya kufuneka babhalise ngaphambi kokufika kwi-philadelphiaunion.com/form/subaru-dog-day-fest.
Umnyhadala we-Make a Dog's Day Fest yinxalenye yenyathelo le-automaker's Subaru Loves Pets, elizinikele ekuncedeni ukuxhasa izilwanyana zasekhaya ezisweleyo.
*Ukukhuliswa kwezinja akunakwenzeka kwisiza e-Subaru Park kwaye nabani na onomdla wokwamkela naziphi na izinja kwisiza kuya kufuneka aye kwindawo yokuhlala yombutho wezilwanyana ukuze agqibezele inkqubo yokuthatha umntwana ongamzalanga abe ngowakho.